Saxafi caawa lagu dilay magaalada Gaalkacyo; bilayska oo aan cidna u qaban jariimada – Radio Daljir
Galkacyo, March 4 – Rag hubaysan ayaa caawa fiidkii dambe magaalada Gaalkacyo ku dilay wariye Cali Axmed Cabdi oo ka tirsanaan jiray shaqaalaha Radio Galkacyo.
Dilka oo ka dhacay agagaarka Hotel Guure ee xaafadda New Garsoor ayay dad goob-joogayaal ahi sheegeen in ay geesteen ugu yaraan laba nin oo bistoollado ku habaysan kuwaa oo goobta isaga cararay.
Wariyaha la dilay ayaa waxa uu sidoo kale xilliyadii ugu dambaysay wax u qori jiray barta internetka ee www.puntlandi.com sida ay Daljir u xaqiijiyeen saxafiyiin ay jaal ahaayeen marxuumka.
Waa wariyihii saddexdaad ee sannadkan cusub ee 2012-ka lagu dilo Soomaaliya. Todobaadkii hore ayaa Muqdisho lagu dilay agaasimihii hore ee Radio Somaliwayn, sannadkan biloowgiisana waxa sidoo kale la dilay agaasimihii Radio Shabellaha Muqdisho.
Magaalada Gaalkacyo oo sannadihii ugu dambeeyay ku caan-baxday in dilalka lagu fuliyo shakhsiyaadka bulshada ka dhex-muuqda ayaa waxa horay loogu dhaawacay laba wariye oo ay midi ahayd gabar iyada oo aan dilalkaas cil loo qabtay ayan jirin.
Mid ka mida qodbadii ka soo baxay shirkii London ee Soomaaliya ayaa lagu xusay ahamiyadda ay leedahay ilaalinta xuquuqda iyo ammaanka saxafiyiinta Soomalaiyeed. Hay’adaha xuquuqda aadanaha iyo beesha caalamka ayaa maamullada Soomaaliya ka jira ku adkeeyay in ay sugaan ammanaka saxafiyiinta, caddaaladdana hor keenaan kuwa caadaystay ugaarsigooda.
Diiwaanka Wararka Daljir http://daljir.com/